Ny Hoditry ny Bibilava | Nisy Namorona Ve?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
TSY misy tanana na tongotra ny bibilava fa mikisaka. Mila hoditra mafy àry izy, satria mikasoka amin-javatra foana ny vatany. Mianika hazo marokoroko ny sasany, ary ny hafa indray misitrika any anaty fasika. Nahoana anefa ny hodiny no tsy mora rovitra?
Diniho izao: Tsy mitovy ny hatevin’ny hoditry ny bibilava sy ny endriny, arakaraka ny karazany. Ny mampitovy azy rehetra anefa dia izao: Mafy ny etỳ ivelany, fa mihamalefaka kosa ilay izy hatrany anatiny. Inona no mahatsara an’izany? Hoy ilay mpikaroka atao hoe Marie-Christin Klein: “Misy mahatsara azy ny zavatra henjana nefa malefaka ny ao anatiny, satria rehefa manindry zavatra ilay izy, dia afaka mivelatra eo amin’ilay zavatra ipetahany fa tsy miridiridy be.” Raha mandalo amin’ny vato maranidranitra, ohatra, ny bibilava, dia faritra ngezangeza amin’ny vatany no indray mitehina satria tsy mihenjana be ny hodiny. Tsy manindrona be àry ny vato tsindriany, ka tsy mora simba ny hodiny. Hafakely ny hoditry ny bibilava satria afaka mamikitra tsara amin’izay zavatra lalovany, ary iny no manosika azy hikisaka. Ara-dalàna raha natao hateza ilay hoditra, satria isaky roa na telo volana vao misolo.
Raha maka tahaka ny hoditry ny bibilava ny mpikaroka, dia mety hahavita solonofo mateza sy miraikitra tsara, izay natao hanatsaram-bika. Mety ho vitan’izy ireo koa ny hanao milina mampisosa entana, izay tsy mila asiana menaka be. Manimba tontolo iainana mantsy ireny menaka ireny.
Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona ve ny hoditry ny bibilava, sa nisy namorona?
Hizara Hizara Ny Hoditry ny Bibilava